December 2018 – Page5– Swel Sone News – NEW VPS
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ sexy မော်ဒယ်လေးဖြစ်တဲ့ အိမ့်ထရက်သျှာကတော့ ပရိသတ်တွေသိကြတဲ့ တက်သစ်စမော်ဒယ်မလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ privacy ချိုးဖောက်ခံရမှုကြောင့် ပြသာနာတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကိုလည်း အပြင်းအထန်ခံခဲ့ရသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ အိမ့်ထရက်သျှာ ဘက်ကနေ ရပ်တည်ပေးနေတဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ သူမရဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းကို စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာစွာနဲ့ ပြန်လည်လျှောက်လှမ်းနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို အကြောင်းတွေပဲ ရှိရှိ သူမရဲ့ အမှားတစ်ခုအတွက် ပြန်လည်ပေးဆပ်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ သူမရဲ့ ဘဝတက်လမ်းအတွက် အကောင်းဆုံးကြိုးစား ပုံဖော်နေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့အိ့မ်ထရက်သျှာ က ပုရိသတွေ ရင်ခုန်သံတွေမြန်သွားအောင် Bikini လေးနဲ့ Tik Tok ကစားထားပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် အိမ့်ထရက်သျှာရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးက်ိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးကလဲ သျှာသျှာက်ိုချစ်ရင် ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို Share သွားဖို့မမေ့နဲ့နော်။ Video ကြည့်ရန် Source: Eaint Treasure
(၄၅) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ မိခင်ကို ငွေကျပ်သိန်း (၁၀၀) နဲ့ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင်
သရုပ်ဆောင် ဒိန်းဒေါင်ဟာ လူရွှင်တော်အဖြစ်ကနေပြီးတော့ သရုပ်ဆောင်လောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်တုန်းက လူရွှင်တော်ဒိန်းဒေါင်ရဲ့ ပျက်လုံးတွေဟာ ပရိသတ်တွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင်မှုတွေပြည့်နှက်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ဒိန်းဒေါင်ဟာ လက်ရှိမှာ ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုရိုက်ကူးနေပြီးတော့ သူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုနဲ့ ရုပ်ရှင်ကားပေါင်းများစွာလည်း ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်မှာအောင်မြင်သလောက် အလှူအတန်းမှာလည်း လက်မနှေးတဲ့ ဒိန်းဒေါင်တစ်ယောက် မကြာခဏ လှူဒါန်းနေမှုတွေကိုလည်း ပရိသတ်ကြီးမြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ လူရွှင်တော်အဖွဲ့ထဲက ချို့တဲ့သူတွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်ပေးတတ်တဲ့ ဒိန်းဒေါင်ဟာ မိဘကိုလည်း သိတတ်ကူညီတဲ့ သားလိမ္မာအဖြစ် ရှိနေပြန်ပါတယ်။ ယနေ့ ကျရောက်တဲ့ ဒိန်းဒေါင်ရဲ့ အသက် (၄၅) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာတော့ ဒိန်းဒေါင်တစ်ယောက် မနက်စောစော သံဃာတော် (၁၁) ပါးကိုဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီးတော့ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ လုံချည်လျှော်ပြီး ကုသိုလ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒိန်းဒေါင်ဟာ ယနေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့ (၄၅) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူကိုကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ မိခင်ဖြစ်သူကို ငွေကျပ်သိန်း (၁၀၀) နဲ့ ကန်တော့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မိဘအပေါ် သိတတ်လိမ္မာတဲ့ ဒိန်းဒေါင်ကတော့...
အသည်းတစ်ယားယား ရင်တစ်ဖိုဖိုနဲ့ကြည့်​ရမယ့်​ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ကြောငြာရိုက်ကွင်း ဗီဒီယို
သူမချစ်တဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ရိုးရိုးသားသားလုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့ မိသားစုကို ထောက်ပံ့နေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ ရိုးရှင်းပွင့်​လင်းလွန်းတဲ့စိတ်​​ကြောင့်​ ပရိသတ်​​တွေရဲ့အချစ်​ကို အပြည့်​အဝရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်​တ​လောမှာ​တော့ သင်​ဇာ​လေးက ကြော်ငြာရိုက်​ကူး​ရေးတစ်​ခုပြုလုပ်နေတဲ့ သူမရဲ့အသည်းယားဖွယ်ဗီဒီယိုလေးကို လူမှုကွန်​ယက်​​ပေါ်မှာ တင်​ထားတာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ ဆပ်ပြာမြုပ်လေးတွေနဲ့ ကွယ်ထားတဲ့ သင်ဇာ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှက ရူးခါနေအောင် လှရက်လွန်းပါတယ်နော်။ ချစ်​ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ Body Care ကြော်ငြာ​နေတဲ့ သင်​ဇာ​လေးရဲ့အ​ကြောင်းကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။ အမြဲလိုလို အလန်းစားပွဲတက်ဖက်ရှင်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ကို ဗလောင်ဆူစေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ ၂၀၁၈ မကုန်ခင်အထိတော့ Sexy လေးတွေဝတ်ခွင့်ပေးပါလို့ ပရိသတ်တွေကို တောင်းဆိုထားပါသေးတယ်။ အသည်းတစ်ယားယားနဲ့ကြည့်ရမယ့် သင်​ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယို ဘယ်လိုတောင်လား သင်​ဇာလေးရယ် အနုပညာသမား​ကောင်းတစ်​ဦးဖြစ်​တဲ့ သင်​ဇာ​လေးက​တော့ အခက်​အခဲ​တွေကို မမှုပဲ သူမချစ်​တဲ့ အနုပညာကိုသာ အ​ကောင်းဆုံး​နဲ့ တာဝန်​အ​ကျေဆုံး ပုံ​ဖော်​​နေတာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​ရဲ့အချစ်ရေးက​တော့ လတ်​တ​လောမှာ ငြိမ်သက်နေပြီး ချစ်​ရတဲ့...
ယနေ့ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်အားပေးခြင်းခံနေရတာကတော့ သရုပ်ဆောင် ဒေါင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂံမြို့သူ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးနဲ့ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကြား တဖန်ရေပန်းစားပြန်လာခဲ့တဲ့ ဒေါင်းဟာ ချစ်သူရှိနေပါပြီလို့ ပြောဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အပြုံးတွေနဲ့ ကလေးဆန်မှုတွေကြားထဲမှာ ကျရှုံးနေကြတဲ့ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကတော့ အများကြီးပါပဲနော်။ ဒေါင်းတစ်ယောက်ကတော့ ယခုအချိန်မှာ ချစ်သူရှိနေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ သို့သော်လည်း ချစ်သူကိုတော့ ကြေငြာစရာတစ်ခုလိုမျိုးကြေငြာသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ “ဒီအရွယ်ကတော့ ချစ်သူမရှိဘူးဆိုတာတော့ မရှိဘူးပေါ့လေ။ ဒီအရွယ်မှာတော့ ချစ်သူဆိုတာတော့ရှိတယ်။ ချစ်တဲ့သူဆိုတာလည်းရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျတော့်ချစ်သူ၊ ကျတော်ချစ်တဲ့သူကို ကြေငြာတစ်ခုလိုတော့ ထုတ်ပြီးမကြေငြာချင်ဘူး။ လိုလည်းမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ကျတော်က လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ လူ့လောကမှာယောက်ကျားလေးရယ် မိန်းကလေးရယ်ပဲရှိတာကိုး အဲဒီတော့ ယောက်ကျားလေးက မိန်းကလေးကို ချစ်တယ် မိန်းကလေးက ယောက်ကျားလေးကိုချစ်တယ် ဒါသဘာဝတရားဖြစ်တဲ့အတွက် ကျတော်လည်းချစ်တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အချစ်ဆိုတဲ့အရာက ကြေငြာတစ်ခုမဟုတ်တဲ့အတွက် ကျတော် လူသားဆန်ဆန်ပဲ ဖြတ်သန်းပါတယ်။” ဒေါင်းချစ်ရတဲ့ ချစ်သူလေးကတော့ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာထက် သူတကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူဖြစ်နေဖို့ပါပဲလို့ ဒေါင်းက ဆိုပါသေးတယ်။...
ချစ်​သူသက်​တမ်း(၇)နှစ်ရှိပေမယ့် ပရိသတ်တွေအားကျအောင် ရိုနေကြတဲ့ ​ကောင်းပြည့်​နဲ့သန္တာဗို တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
ပရိသတ်​​တွေ ချစ်​ကြတဲ့ အနုပညာရှင်​ စုံတွဲတစ်​တွဲဖြစ်​တဲ့ ​ကောင်းပြည့်​နဲ့ သန္တာဗိုက အချစ်​စစ်​တစ်​ခုကို ရည်​ရှည်​တည်​တံ့စွာ တည်​​ဆောက်​ထားနိုင်​ကြသူ​တွေပါ။ ​ကောင်းပြည့်​နဲ့ သန္တာဗိုက လာမယ့်​ ၂၀၁၉ ခုနှစ်​ မတ်​လ(၁)ရက်​​နေ့မှာ ချစ်​သူသက်​တမ်း ၇ နှစ်​နှစ်​ရှိ​တော့မှာဖြစ်​ပါတယ်​။ နားလည်​မှုအပြည့်​နဲ့ တည်​​ဆောက်​ထားတဲ့ အချစ်​​ရေး​လေးမို့ ဒီ​လောက်​ကြာကြာခံတာ မဆန်းပါဘူး​နော်​။ ​ကောင်းပြည့်​နဲ့ သန္တာဗိုက အနုပညာလုပ်​ငန်း​တွေကို လုပ်​ကိုင်​​နေတာဖြစ်​ပြီး မအားလပ်​ကြ​ပေမယ့်​ တစ်​​ယောက်​ကိုတစ်​​ယောက်​ အချိန်​​ပေးပြီး ချစ်​ကြတဲ့အတွဲ​လေးပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ သန္တာဗိုက ​ကောင်းပြည့်​နဲ့ ​တွေ့တုံး​လေး ချွဲစိန်​​လေးလုပ်​ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယို​လေးကို သူမရဲ့ instagram မှာ တင်​ထားပါတယ်​။​ကောင်းပြည့်​နဲ့ သန္တာဗိုတို့ရဲ့ အားကျဖွယ်​ ဗီဒီယို​လေးကို ပရိသတ်​ကြီးအတွက်​ တင်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။ ချစ်​သူသက်​တမ်း(၇)နှစ်​အတွင်း ပိုပိုချစ်​လာကြတဲ့ ​ကောင်းပြည့်​နဲ့ သန္တာဗို ပရိသတ်​ကြီးလဲ ​ကောင်းပြည့်​နဲ့ သန္တာဗိုတို့အတွဲ​လေးကို အားကျ​နေကြမယ်​ထင်​ပါတယ်​။ မိုမို​လေးချစ်​ပရိသတ်​​တွေလဲ သာယာကြည်​နူးဖို့​ကောင်းတဲ့ ချစ်​သူဘဝ၊ အိမ်​​ထောင်​သည်​ဘဝ​လေးကို ကိုယ်​စီကိုယ်​စီ ပိုင်​ဆိုင်​နိုင်​ကြပါ​စေလို့ ဆု​တောင်း​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။...
Body ကောက်ကြောင်းလှတဲ့ ဆယ်လီအမျိုးသမီးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲကမှ ပုရိသတွေကြားမှာ အရမ်းကို နာမည်ကြီးတဲ့ ဆယ်လီမမတွေ ရှိပါတယ်။ ကိုကိုမောင်မောင်တွေ ကြားမှာ အရမ်းကိုလှတဲ့ ကောက်ကြောင်းပိုင်ရှင်aတွ အဖြစ် နာမည်ကြီးနေသူလေးတွေ ဘယ်သူတွေ ဖြစ်မလဲ..? အမျိုးသားထုတွေကြားမှာ ကောက်ကြောင်းလှတဲ့ မမတွေ အဖြစ် နာမည်ကြီးနေသူတွေကတော့……………. 10#နန်းသီရိမောင် နန်းသီရိမောင်ကတော့ ပုရိသတွေကြားမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ အဆိုတော်၊ မော်ဒယ်မလေးပါ။ ပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ ကိတ်တဲ့ Body လှလှလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ 9#ဘေဘီမောင် နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ မော်ဒယ်မင်းသမီးလေး ဘေဘီမောင်ပါ။ သူမကလည်း မိန်းကလေးဆန်ပြီး လှပတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ မြန်မာဝတ်စုံပဲ ၀တ်ဝတ်၊ ခေတ်ဆန်တဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေကိုပဲ ၀တ်ဝတ် လိုက်ဖက်တဲ့ Body အလှပိုင်ရှင်ပါ။ 8#မေပန်းချီ မေပန်းချီကတော့ အမျိုးသားပရိသတ်တွေကြားမှာ ကိတ်တဲ့ Body အမိုက်စားကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့...
မိတ်ကပ် မေဦး ရဲ့ May& Co ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် အနုပညာရှင်များ
နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးတွေကို လှပအောင် ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ နိုင်ငံကျော် မိတ်ကပ်ပညာရှင် မေဦး ဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ မိတ်ကပ်ပညာရှင်များထဲမှ တစ်ဦးအပါအဝင်ပါ။ မိတ်ကပ်မေဦးက ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ဖွင့်လစ်ခဲ့တဲ့ May & Co ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးကို ဖွင့်ခဲ့ပြီး ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကို နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်များတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ မိုမိုလေးပရိသတ်ကြီးအတွက် ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကို တက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် တို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ မိတ်ကပ်မေဦး ရဲ့ May &Co ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ အင်းလျားလမ်းမှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကို နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ လူမင်း တို့ဇနီးမောင်နှံ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ ဝတ်မှုံရွှေရည်၊ ယွန်းဝတီလွင်မိုး ၊ ရွှေအိမ်စည် နဲ့ ကျန်နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင် များစွာတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါ။ မိတ်ကပ်မေဦး ရဲ့...
ချစ်တတ်လွန်းတဲ့ ယောက်ကျားဖြစ်သူရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေအကြောင်းကို ကြွားလိုက်တဲ့ ရွှေမှုန်ရတီ
အနုပညာနယ်​ပယ်​တစ်​ခုစီက​နေ ပရိသတ်​​တွေရဲ့ လက်​ခံအား​ပေးခြင်းကို အပြည့်​အဝရရှိထားတဲ့ အဆို​တော်​​ရွှေထူးနဲ့ မင်းသမီး​ချော​လေး ​ရွှေမှုံရတီတို့နှစ်​ဦးက​တော့တစ်​ဦးနဲ့တစ်​ဦး နှစ်​နှစ်​ကာကာ ချစ်​မိသွားကြတာမို့ အခက်​အခဲ​တွေကိုရင်​ဆိုင်​ရင်း နှစ်​ကိုယ်​တူ ​ပျော်​ရွှင်​စရာ​ကောင်းတဲ့ အိမ်​​ထောင်​​ရေးတစ်​ခုကို နှစ်​ကိုယ်​တူ ပုံ​ဖော်​​နေကြတာပါ။ လတ်​တ​လောမှာ​တော့ ​ရွှေမှုံရတီက​ ​ခရီးသွားခါနီး​တောင်​ သူမအတွက်​ စိတ်​မချလို့ အဝတ်​အစားကအစ အ​သေးစိတ်​ဂရုစိုက်​​ပေးခဲ့တဲ့ ခင်​ပွန်းဖြစ်​သူရဲ့အ​ကြောင်းကို လူမှုကွန်​ယက်​စာမျက်​နှာ​ပေါ်မှာ ကြည်​ကြည်​နူးနူး တင်​ထားတာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ ချစ်​ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ ဇနီး​ချော​လေးကို ချစ်​တတ်​လွန်းတဲ့ ​ရွှေထူးရဲ့အ​ကြောင်းကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။ ​ရွှေထူးက​တော့ အစားအ​သောက်​​တွေနဲ့ အဝတ်​အစား​တွေကအစ ချစ်​ဇနီး​လေးကို ပြင်​ဆင်​​ပေးခဲ့တာပါ။ ကြင်​နာတတ်​လွန်းတဲ့ ခင်​ပွန်းရဲ့အ​ကြောင်း​ပြောထားတဲ့ ​ရွှေမှုံ​လေး ရဲ့ဗီဒီယို ​ရွှေထူးက​တော့ လတ်​တ​လောမှာ နယ်​ရှိုးပွဲဆိုရင်းနဲ့ တစ်​ခြား​သော အနုပညာ အလုပ်​​တွေဆက်​တိုက်​ လုပ်​ဖြစ်​​နေတာဖြစ်​ပြီး ​ရွှေမှုံ​လေးကလည်း ဇာတ်​ကား​တွေ ဆက်​တိုက်​ရိုက်​ကူးဖြစ်​​နေတာ ​တွေ့ရပါတယ်​​နော်​။​ရွှေထူးနဲ့ ​ရွှေမှုံရတီတို့နှစ်​ဦးက​တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ​အောက်​တိုဘာလ ၃၀ရက်​​နေ့က လက်​ထပ်​လက်​မှတ်​ထိုးခဲ့ပြီး နိုဝင်​ဘာလ ၁၁ရက်​​နေ့ညမှာ မင်္ဂလာပွဲ...
အလှမယ်​တစ်​ဦးအ​နေနဲ့​ရော အဆို​တော်​တစ်​ဦးအ​နေနဲ့ပါ အရည်​အချင်းပြည့်​ဝသူတစ်​ဦးဖြစ်​တဲ့ ​မေမြတ်​နိုးက​တော့ သရုပ်​​ဆောင်​ပ်ိုင်းမှာလည်း ကျွမ်းကျင်​ပိုင်​နိုင်​သူတစ်​ဦးပါ။ ​လတ်​တ​လောမှာ​တော့ ​မေမြတ်​နိုးက တရုတ်​နိုင်​ငံ NanNing မှာ ကျင်းပပြုလုပ်​တဲ့ Newyear event ပွဲကြီးမှာ မြန်​မာနိုင်​ငံရဲ့ ကိုယ်​စားပြုအ​နေနဲ့ ဖိတ်​​ခေါ်ခံခဲ့ရပြီး နိုင်​ငံတစ်​ကာက ​စောင့်​ကြည့်​​နေကြတဲ့ပွဲမှာ ချိုသာတဲ့အပြုံး​လေး​တွေနဲ့ အ​ကောင်းဆုံးတင်​ဆက်​နိုင်​ခဲ့တာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ ချစ်​ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ ကြီးကျယ်​ခမ်းနားတဲ့ စင်​မြင့်​ထက်​မှာ မြန်​မာတစ်​ဦးအ​နေနဲ့ အ​ကောင်းဆုံး​ဖျော်​​ဖြေတင်​ဆက်​ခဲ့တဲ့ ​မေမြတ်​နိုးရဲ့ပုံရိပ်​​တွေကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။ ​မေမြတ်​နိုးက​တော့ “Our Region Our Song New Year Event in NanNing, GuangXi China မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုခွင့်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရလို့ အရမ်းဂုဏ်ယူ ဝမ်းသာမိပါတယ်💕” ဆိုပြီး အဆိုပါပွဲမှာ ​ဖျော်​​​ဖြေခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်​​တွေကို လူမှုကွန်​ယက်​မှာ ​ဝေမျှ​ပေးထားတာပါ။ ​မေမြတ်​နိုးက​တော့ ​ကျက်​သ​ရေရှိလှတဲ့ မြန်​မာဝတ်​စုံ​လေးနဲ့လည်း ​ဖျော်​​ဖြေတင်​ဆက်​ခဲ့ပါ​သေးတယ်​။ အတူ​ဖျော်​​ဖြေခဲ့ကြတဲ့ နိုင်​ငံတစ်​ကာက အနုပညာရှင်​​တွေနဲ့ သူမ...
ထူးခြားတဲ့အသံပါဝါနဲ့ သီချင်း​ကောင်း​တွေကို သီဆိုတတ်​တဲ့ အဆို​တော်​ ဖြူဖြူ​ကျော်​သိန်းဟာ က​လေးအစ လူကြီးအဆုံး ကြိုက်​နှစ်​သက်​ကြတဲ့ အဆို​တော်​တစ်​ဦးပါ၊ ဖြူဖြူ​ကျော်​သိန်းက ဆရာဝန်​တစ်​ဦးဖြစ်​​ပေမယ့်​ သူမဝါသနာပါရာ အနုပညာလမ်းကိုသာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့​ ​လျှောက်​လှမ်း​နေသူတစ်​ဦးလဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ဖြူဖြူ​ကျော်​သ်ိန်းကို ချစ်​ခင်​အား​ပေးတဲ့ ပရိသတ်​​တွေကလဲ နယ်​ပယ်​အသီးသီးမှာ အများအပြားရှိ​လို့​နေပါတယ်​။ ဖြူဖြူကျော်သိန်း လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ အားလုံး သိကြတဲ့ အတိုင်း သံစဉ်တွေကြားက ဂီတပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူ ဟာ မထင်မှတ်ဘဲ နိုင်ငံတော် က ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ခရစ်စမတ်ညစာစားပွဲ မှာ ဖြူဖြူ တစ်ယောက်ပါဝင်ဖျော်ဖြေခွင့် ရခဲ့ရုံသာမက နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့ ချီးကျူးခြင်း ကိုပါ ခံလိုက်ရပါတယ်။ ဖြူဖြူ ဟာ သေးသေးသွယ်သွယ်လေးဖြစ်ပေမယ့် အသံပါဝါကောင်းတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ကိုယ်တိုင်က ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ အသံကို အလွတ်ကျက်မိနေပါတယ်တဲ့ ။ခရစ်စမတ် ညစာစားပွဲအပြီး မှာ...